Ahiahy tafikan-taova :: Lehilahy fito nogadraina sady enjehina tamin’ny halatra voamaso • AoRaha
Nentina tany amin’ny mpitsara mpanao famotorana eo anivon’ny Fampanoavana, omaly, ny valin’ny fanadihadiana sy ny fikarohana nataon’ny polisy tamin’ny fahafatesana zazalahikely noesorina voamaso, tany Besakoa Toliara.
Naiditra am-ponja vonjimaika ny lehilahy miisa fito voarohirohy. Voatondro ho tompon’antoka tamin’ny famonoana sy fangalarana ny mason’ilay zazalahikely izy fito ireo.
Nambaran’ny loharanom-baovao iray akaikin’ny famotorana fa nandà ny fiampangana azy ireto voasambotra. Misy kosa ny porofo itazonana azy ireo. “Nambaran’ny mpitsabo nanao ny fizahana ny razana fa sotro no nisokirana ny voamason’ilay ankizy. Nahitana sotro rovitra tany amin’ireo voasambotra. Tsy nahavaly ny fanontaniana momba ny niavian’io sotro io izy ireo rehefa natao famotorana. Teo ihany koa ny fahatrarana zavatra enina miendrika voamaso tany amin’izy ireo”, hoy ny loharanom-baovao.
Tsy misy fitarainana hafa
Fantatra fa tsy mbola nisy ny fitarainana voarain’ny polisy amin’ny fisiana olona very voamaso, ankoatra ilay zaza hita faty tao amin’ny lisea Antaninarenina.
Tsiahivina fa niara-nilalao baolina tamin’ny namany, tamin’ny alahady 9 febroary, no nahitana farany an’ilay zazalahikely, 6 taona. Nitady azy ny fianakaviany, ny alin’io, noho ny tsy fodiany tany an-trano. Hita tao amina efitrano fianarana iray tany amin’ny lisea Antaninarenina ny vatana mangatsiakany, ny ampitso. Tsy teo intsony ny voamasony ilany. Nosamborina avy hatrany ny mpiambina tao amin’ny lisea. Tratra, taorian’izany, ny lehilahy enina voatondro ho niray tsikombakomba taminy.
Fitsoahana loza :: Nandositra ny môtô nandratra olona teny Ilafy